INetBeans 8.2, faka le IDE kwi-Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ekufakeni i-NetBeans 8.2 kwi-Ubuntu 18.04. Njengoko ndicinga ukuba wonke umntu uyazi ngoku, uyi IDE (Imo yophuhliso oluhlanganisiweyo) iyafumaneka kumaqonga ahlukeneyo. Malunga nale nkqubo, umntu esisebenza naye sele ethethile nathi ngendlela eneenkcukacha nqaku yangaphambili.
I-IDE yeNetBeans ibonelela abasebenzisi ngeqonga elinamandla kakhulu elenza ukuba abadwelisi benkqubo bakwazi ukuphuhlisa ngokulula usetyenziso Iwebhu esekwe kwiJava, usetyenziso lweselfowuni kunye needesktops. Uninzi luthi yenye yezona IDE zibalaseleyo zenkqubo yeC / C ++. Ikwabonelela ngezixhobo eziluncedo kakhulu kwiinkqubo ze-PHP. I-IDE inika inkxaso kwiilwimi ezininzi ezinje nge-PHP, C / C ++, XML, HTML, Groovy, Grails, Ajax, Javadoc, JavaFX kunye neJSP, Ruby kunye neRuby kwiRails.
Umpapashi ngu uphawu olutyebileyo kwaye ibonelela uluhlu olubanzi lwezixhobo kunye neetemplate. Kukwanjalo iyandiswa kakhulu usebenzisa iiplagi eziphuhliswe luluntu, ezenza ukuba zilungele uphuhliso lwesoftware.
I-Netbeans iyafumaneka kwii-Ubuntu zokugcinaKe, ukuba sifuna ukuba nohlobo oluzinzileyo ngendlela elula, kufuneka siye kukhetho lwe-Ubuntu Software. Xa sele silapho kuya kufuneka sijonge igama elithi Netbeans kwaye ucinezele iqhosha elithi "Faka". Ukuba ngokuchaseneyo sifuna faka inguqulelo entsha kunye nesiko, singayenza ngesandla. Kule nqaku siza kubona indlela yokufaka ingxelo yokugqibela yeNetBeans namhlanje, eyi-8.2. Ndizakwenza olu fakelo kwi-Ubuntu 18.04, nangona inokwenziwa nakwi-Debian nakwi-Linux Mint.
Okokuqala, kufuneka sicacise ukuba ukufaka ingxelo 8.2 yeNetbeans kufuneka sifezekise iimfuno ezimbalwa kwikhompyuter yethu. Eyokuqala yile Ubuncinci be-2 GB ye-RAM iyafuneka. Kwaye kuyakufuneka kwiqela lethu iJava SE Development Kit (JDK) kwiqela lethu 8. Kuyimfuneko ukufakela le IDE. I-NetBeans 8.2 ayibaleki nge-JDK9, kwaye ngokwenza njalo kunokubangela iimpazamo.
1 Faka iJava JDK 8
2 Faka iNetBeans IDE 8.2 kwi-Ubuntu 18.04
3 Khipha iNetbeans
Faka iJava JDK 8
Umntu esisebenza naye sele esixelele malunga ukufakwa kweenguqulelo ezahlukeneyo zeJava kwinkqubo yethu Ubuntu. Ukufaka i-Java 8 JDK version esiyifunayo, siza kuqala ukongeza i-webupd8team / java PPA kwinkqubo yethu. Ukwenza njalo, sivula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye uthayiphe:
Nje ukuba uluhlu lwethu lwesoftware longezwe kwaye luhlaziywe, siya kukhangela iipakeji ezinegama Oracle-java8 njengoko kubonisiwe ngezantsi kwaye sigqibe ukufaka:
Ukuba uneJava engaphezulu kwesinye efakwe kwindlela yakho, ungafaka i-Oracle-java8-set-default package ukuseta iJava 8 ngokungagqibekanga:
Faka iNetBeans IDE 8.2 kwi-Ubuntu 18.04
Ngoku usebenzisa isikhangeli sakho osithandayo, yiya kwifayile ye- IDE iphepha lokukhuphela kwaye ukhuphele ingxelo yokugqibela ukusuka kwisifaki seNetBeans.
Unokukhuphela kwakhona iskripthi sokufaka seNetBeans kwinkqubo yakho ngokusebenzisa i-wget. Ukwenza oku sivula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye sibhale:
Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, kulawulo olusebenzayo ukuba sisebenzisa i-wget okanye kwindawo apho sigcina ukhuphelo kwisikhangeli, siya kufumana isifaki seNetBeans. Ngoku usebenzisa lo myalelo ulandelayo, Siza kwenza ukuba iskripthi siphunyezwe. Kanye emva kokuba siza kuqala ngofakelo:
Emva kokwenza le miyalelo ingentla, kuya kuvela 'ifowuni yokwamkela'. Siza kucofa Okulandelayo ukuze siqhubeke (okanye ngokwezifiso ufakelo lwakho ngokunqakraza ngokwezifiso) kwaye ulandele iwizard yofakelo.
Emva koko kuya kufuneka funda kwaye wamkele imigaqo kwisivumelwano selayisensi. Siyaqhubeka ngokunqakraza Okulandelayo.
Njengoko ubona kwisikrini sangaphambili, siya kukhetha i Ifolda yokufaka yeNetBeans IDE 8.2 kunye nefolda apho sifake khona i-JDK. Siyaqhubeka ngokunqakraza Okulandelayo.
Kwiskrini esisibonayo ngoku, sikhetha kwakhona ifayile ye- Ifolda yokufakwa kweseva yeGlassFish. Njengangaphambili, siyaqhubeka ngokunqakraza Okulandelayo.
Kwiskrini esilandelayo, apho kuboniswa isishwankathelo sokufakwa. Apha siya kwenza uhlaziyo oluzenzekelayo okongeziweyo okufakelweyo kwibhokisi yokukhangela. Ngoku siza kucofa kuFaka ukuqala ukufakela.
Xa ufakelo lugqityiwe, kuya kufuneka ukuba ucofe ku-Gqiba. Ngoku singonwabela i-IDE yeNetBeans. Kufuneka nje siyikhangele kwikhompyuter yethu kwaye ucofe kwisiqalisi.
Ukususa le nkqubo kulula kakhulu. Kuya kufuneka siye kwifolda esiyikhethele ufakelo kuphela. Sakuba silapho siza kudibana ne- ifayile enegama uninstall.sh. Le iya kuba yifayile yokuqhuba ukususa ngokupheleleyo i-IDE kwikhompyuter yethu. Kwisiphelo (Ctrl + Alt + T) kuya kufuneka siphume kuphela, ukusuka kwifolda apho ikhoyo ifayile apho:
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » INetBeans 8.2, faka le IDE kwi-Ubuntu 18.04 yakho
UCesar Barrionuevo sitsho
Enkosi ngengcaciso elungileyo. Isebenza ngokumangalisayo.
Phendula César Barrionuevo
UCesar G. Rivas sitsho
Molo, enkosi ngegalelo lakho, ndiwenzile onke amanyathelo, kodwa xa ndivula inkqubo ayivuli nayiphi na iprojekthi okanye nayiphi na ifayile, okanye enye into, ndingenza ntoni ngayo?
Phendula kuCesar G. Rivas
UDamian Amoedo sitsho
Mholo. Zama ukukhipha iiNetbeans kwaye ukhuphele u "Zonke" uguqulelo. Ukuba ayikasebenzi kuwe, zama ukufaka enye inguqulelo yeJava (kwaye usete njengokusilela kwinkqubo yakho). Salu2.
Umhlobo ufake ii-netbeans 8.2 konke kwaye kuyenzeka kum into efanayo iqhuba iinetans kodwa amaqhosha okwenza iprojekthi entsha akenzi nto, ayivuli iimodyuli ezifanayo kwimeko yomhlobo uCesar
Enye into, ndingayikhupha njani i-JDK endiyifakileyo?
Molo Nestor, ndiza kukushiyela ividiyo ethi ukuba uyamlandela kule leta uza kuyisombulula ingxaki, ngokusisiseko imalunga nokucacisa kwi-netbeans inguqulelo yeJava osebenza nayo, oko kukuthi, leyo uyifakileyo kwi-OS yakho. Oku ndiye ndaqonda ukuba kwa-IDE efanayo ikunika ithuba lokuyichaza kufakelo. Nayi ividiyo:
Molweni bafo, ndimise kwivenkile ye-UBUNTU nalapho ndafumana i-NetBeans, nangona kunjalo, kwenzeke impazamo kum ndaya kwiwebhu ndaza ndafumana ezi khowudi zesiphelo kwaye ngoku ndiyayikhuphela 😉
Enkosi mhlobo wam !!
Ukubaleka umyalelo sudo apt-fumana ukufaka i-oracle-java8-installer kundibonisa oku
Iphakheji ye-Oracle-java8-installer ayifumaneki, kodwa ezinye izingqinisiso zephakheji
kwi. Oku kunokuthetha ukuba iphakheji ayikho, ayisebenzi, okanye iphela
ifumaneka komnye umthombo
viridiana solis sitsho
molo into enje yenzekile kum, into endiyenzileyo yile ilandelayo
Ukukhangela ngokufanelekileyo jdk
I-sudo ifake ukufaka i-openjdk-8-jre
I-sudo ifake ukufaka i-openjdk-8-jdk
Phendula viridiana solis
yenzayo Iiyure ze23
Apache Netbeans ya borró Netbeans 8.2